Shira Oromoo naannoo Beenishaangul gumuz irratti dalagamaa jiruuf Akeekkachiisa Qeerroo Matakkal-Asoosaa-wambaraa irraa kenname |
Abdii Lammii tin, Hagayya 7, 2018
Uummanni Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz jiraatu shira walitti bu’insaa mootummaan TPLF xaxaa tureen goolamaa tureera. Kanaafis shira walitti bu’insa Asoosaa, Toongoo, Teenzee fi Beegiitii godhameen ilmaan Oromoo qe’ee fi qabeenya isaarraa buqqa’eefi ajjeefame ragaadha.
Uummanni Oromoo Matakkalis yeroo garaa garaa shira waitti bu’insaa saba biraa wajjin karaa TPLF fi jala deemtuun caasaa Dh.D.U.O duraaniin xaxamaa ture dammaqinsaan ofirraa qolachaa tureera. Uummanni Oromoo Matakkalis utuu mirgaa fi saba biraatti hin bu’iin mirga abbaa biyyummaa irraa molqamee ture bifaa fi karaa garaa garaan falmachaa ture jiras.
Haa ta’uyyuu malee yeroo ammaa Odeessi keessa beektotaan raggaasifamaa jiru abbootiin qabeenyaa TPLF saamichaaf jecha Mootummaa naannoo Beenishaangulii fi Naannicha holqaa fi dahoo godhachuun shira bifa haaraan uummata Oromoo naannichaa fi hidhaa laga Abbayyaa irratti xiyyeeffate wixinatanii turuu fi hojitti gala jiraachuu ni ibsa.
Odeessi ragaan bira gahame kuni Abbootiin qabeenyaa TPLFf mootummaan naannichaa waliin ta’uun dhalattoota Gumuz dhibba afur (400) gara naannoo Guba jedhamutti geessuun leenjii waraanaa kennaa jiru. Leenjii waraanaa kana booda 1ffaa Dhalattoota Oromoo Matakkal irratti walitti bu’insa fakkeessuun waraana labsuu, Buqqisuu fi ajjeesuu yommuu ta’u. inni 2ffaa ammoo naannoo hidhaa Haaromsaa Abbayyaatti rakkoo nageenyaa uumuun saamicha kanaan dura TPLF maqaa ijaarsa hidhichaan saamaa turte awwaaluuf akka ta’e bira gahameera.
Shira kana keessaa warren qooda guddaa qabanis:
1ffaa Abbootii qabeenyaa TPLF Asoosaa keessatti warra hoteelaa fi daldala garaa garaa irratti bobba’anii jiran,
2ffaa Dhaabbata METEC,
3ffaa Miseensota TPLF,
4ffaa Mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi
5ffaa Qaamotiin dhuunfaa warri kanaan dura shira wal fakkaataa irratti hirmaachaa turan kanneen akka Dr. Amsaaluufaa akka ta’e beekameera.
Kanaafuu, uummanni Oromoo naannichaa keessumaa Uummanni Oromoo Matakkal yeroo kamiyyuu caalaa dammaqinaan of eeggannoo gochuu qaba jechaa; Nuti Qeerroon Matakkal-Asoosaa- Wambaraa Ibsa ejjennoo kanaa gadii baafannee jirra:
Shira walitti bu’insaa TPLF fi Mootummaan Naannoo Beenishaangul Gumuz dalagaa jiran kan Mootummaan Biyyattii fi Mootummaan Naannoo Oromiyaa akkasumas uummanni Oromoo Biyya keessaafi Biyya alaa waliif dirmachuun Uummata Oromoo nagaan jiraatu Gaaga’amaa fi Duguuggaa sanyii qindaaye kanarraa hatattamaan baraaruu qaba;
Mootummaan Naannoo Beenishaangul Gumuz Shira kanaaf dahoo ta’ee ilmaan Oromoo ficcisiisuu irraa hatattamaan of qusachuun shira kana fashalsuu qaba;
Saboonnii fi sablammoonni naannichaa keessumaa sabni Gumuz shira kanarratti dammaquun qabeenyaa fi qe’ee isaarratti qodaa fi ergamtuu TPLF ta’uun Uummata Oromoo nagaa fi jaalalaan waggoota hedduu waliin jiraachaa ture ajjeesuu fi nagaa biyyattii booressuu irraa of qusatee uummata nagaa Oromoo naannichaa wajjin mirgoota sirnichaan molqamaniif waliin qabsaawuu qabu;
Leenjiin waraanaa bakka Guba jedhamutti Angawootaa, Abbootii qabeenyaa TPLF fi Mootummaa naannoo Beenishaanguliin kennamaa jiru nagaa biyyattii kan booressuu fi Hidhaa haaromsa laga abbayaa kan sakaalu waan ta’eef mootummaan Federaalaa gidduu galuun dhaabsisuu qaba jenna.
Injifannoon Uummata Cunqurfameef!!!
Qeerroo Matakkal-Asoosaa-Wambaraa irraa
Hagayya 8, 2018
Previous articleODUU AMMEE: Ibsa Waloo Waliigalatee Mootummaa Itoophiyaa fi Adda Bilisummaa Oromoo
Next articleTokkummaa Oromoo dagaagaa jiru kunuunfataa, warraaqsa dararee firii itti gochuuf nii qabsoofna!